Tencent nwetara Supercell maka nde dollar 9.000 | Androidsis
Anyị nọ na -eche ka ụfọdụ ndị buru ibu ju anyị anya wee zụta Supercell, ụlọ ihe nkiri egwuregwu vidiyo nke nwere naanị utu aha anọ n'ahịa ọ gosila ihe ọ nwere ike, site n'ịchịkọta ihe karịrị nde ndị ọrụ 100 na -egwu ngwaahịa anọ a kacha mma kwa ụbọchị.
Mana n'ikpeazụ ọ gaghị adị otu a, Tencent, ndị nwere WeChat, abịala wee zụọ ahịa Supercell maka ijeri $ 9.000. Yabụ Clash Royale, Nsogbu nke Clans, Hay Day na Boom Beach gafere n'aka Tencent site taa wee ju onye ọ bụla anya n'ihi na ọ bụ otu n'ime ụlọ egwuregwu vidiyo na -eme nke ọma n'oge a. Tencent na -echekwa ọnọdụ dị mma na mpaghara egwuregwu vidiyo maka ngwaọrụ mkpanaka.
Tencent na ịzụrụ ihe a na afọ gara aga na nweta egwuregwu Riot, ndị ikpe mara ijikọ ọkara ụwa na nnukwu Njikọ Njikọ, nwere egwuregwu vidiyo abụọ kacha mma n'ụwa. Njikọ nke Akụkọ Ifo nwere ego ruru nde dollar 1.630 kwa afọ yana ọ bụ otu n'ime ahịa kacha elu nke PC.
Egwuregwu LoL na Supercell nwere nnukwu ego n'ihi micropayments na ndị egwuregwu na -eme ịzụta ndị dike ọhụrụ ma ọ bụ igbe ndị ahụ, n'ihe banyere Clash Royale, nke na -enye ohere iji nweta kaadị kacha mma. Ọ bụkwa na Tencent na -aghọ ike zuru oke site na inwe oke na ahịa ngwaahịa Activision Blizzard, ndị mepụtara World of Warcraft na Gears of War na nke nwetara eze n'oge na -adịbeghị anya, ndị mmepe Candy Crush Saga.
Ọ ka ga -amata nkwekọrịta ikpeazụ nke ịzụrụ nke a ga -ekpughe ụbọchị niile. Ọzọ dị mma ịzụta site n'ọmụmụ ihe na -abanye n'aka ndị ukwu ndị ọzọ na -echekwa franchise dị iche iche dị oke mma na n'etiti ha anyị na -ahụ nnukwu Nsogbu Royale. Site n'ụzọ n'ụtụtụ a nwere mgbanwe na nguzozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Tencent zụtara Supercell maka ijeri $ 9.000
Facebook na-enweta nkatọ maka ịmanye Messenger ka ọ na-elekọta ijikwa SMS